Author: Sharr Kazizshura
Maroodiga oo ka cabsada shinnida. Hadday adhax-tuujin tahay, Abshir-Bacadle gubashada, Jiilaalka gahangaha, Laaskiisu kama gudhin, Rafad gololadiisii, Googgoosyadiisii, Geeduu ku dari jiray.
Abbaar iyo nuxur lahayn, Gudub magacu waa hore Galbay oo la wada maqal Dunidoo dhan wada gaadh Gabdhihiina loo sheeg Iyadaan god loo deyn Gibishay I saareen Geestee u duubaa?
Hadraawi waa ninka keliya ee Somali soo maray ee aan weli lagu arag isagoo qof ama dad ku maagaya maanso ama gabay,marka laga reebo keligii taliyihii Maxamed Siyaad Barre,Hadraawi waa ninka keliya ee abwaanimadiisa loogu saxeesayo in uu yahay waddani, waa ninka keliya ee suugaantiisa aan aan laga helin iin ama qalooc, waa ninka keliya ee la odhan karo waa abwaan, hal abuur, suugaan yahan ah, Hadraawi waa nin illaahay hibo u siiyey hal-abuurnimada, abwaanimada,Magaca Hadraawi wuxuu kula baxay, isagoo aad u yar oo Cadan malcaamad ku dhiganaya, ayaa macalinkiisii oo nin carab ahaa ayaa wuxuu arkay isagoo caruurtii quraanka dhiganaysay jeediyey oo sheeko caruureed uu miyiga ku soo bartay uga sheekaynaya,caruurtaas oo carabta ku dhalaytay xiisaynaysana sheeko caruureedda, ayaa macalinkii maalin maalmaha ka mid ah wuxuu isi soo daba taagay Hadraawiyoo caruurtii laga doonayey inay wax akhriyaan sheeko caruureed dabada u haya.
Axsaanta ku laaban weydo, Kuye “duunyadeennii Daratiyo kud weydii Dadna waa anoo qudha”. Oda lama filee Afti iyo haddii Ergo loola tago Tolow aabbaheed Muxuu odhan lahaa?
Isna wuxuu majiiraha Uga daba maleegtaa Celi maganta baadida, Is maqiiqiddiisiyo Mintidkiyo dedaalkaa Hadba muruq u siibtaa; Dee muxuu sameeyaa Ilkahaa u midigoo Micidaa u gacanee. Oomaarkiyo dhiigga daawo, Wuxuu yidhi dul-badanii “doonnidii la raran jirey ma nafbaa ka daydeen mise wuu dibboodoo dugaag caydha baa helay?
Xulkooda haddaad abbaarto, Ma ogtahay barbaarreey Qalabkana bud dhumucliyo Waran iyo billaawaa Kuu baadi soocee Ma ogtahay barbaarreey Barshin iyo darfooley Bayluuli xaradhlaa Kuu baadi soocee Ma ogtahay barbaarreey Waxa loo buseelaa Ama qurux ku caan baxay Ama laysku baantaa Ama lagu bogsoodaa Kal bugtaa ku faydaa Kugu deeqa baashaal Guri bila ku magac dheer Hablaheenna bilicdiyo Biligiyo il-waadka leh Bilcantii shisheeya ah Ninka beegsanaayow Waxaan kaaga baqayaa Inaad baadi noqotee Cidla baylah keligaa Yaanu bahalku kaa helin Isu buri geyaankaa Barta gogoshu kuu taal Bahda lagama maarmaan Bud-dhiggaaga koowaad Baaqaygu waa kaas.
Anna ima canaanteen Ma duruusihiisaad Igu beeninaysaa?
Hordhac Maxamed Ibraahim Warsame Hadraawi waa hal-abuur maanseed, oo dabuuubta maansadiisa kala soo dhex baxay dhudhubo shareeran iyo dhadhaaabo shuban haadraawi. Wixii arrin kaa daboolan, Immisaan ku jiri baaq Heestii ukulidiyo Cabashiyo abla-ablayn?
Doqonniimo lama dhayo Hedna lama daweyn karo Dadka aad ka dhalatiyo Dalka aad u dhalatiyo Nin la yidhi danta u tali Hadan laga dabqaatiyo Diric iyo fariid noqo Dibin daabyo ku ogow Duco iyo xusuus iyo Duug aad ka dhaxashide Xilka daacad ugu yadraawi Ha dullayne gaadhsii Meeshay daraaddeed U galeen dagaakii Diiftiyo kulka lahaa Dib u dhaca ka maaree Dumar iyo rag hawl geli Kartidooda deeqsii Derjow sugnaatoo Guul baa u dagatee Alla doori saw kaa Darka jiidhay Maaweel!
Hasraawi gedmaysoo i galaa baxaysee maxaa goolal igu maqan?
Ma arraa ma urraa!? Unuunka haddaad ka goyso, Maxaa arrin kuu dambeeya! Rabiyow dirkeygii gobolaa dambeeyoo u dib jirey caddaawoo gabayaa gumeystuhu daran-doori lagu dayey rabiyow ka soo daa Dibin-daabyadoodoo shanta dagal isu keen.
Uurkayga waxaan ku haysto, Waxa uu si cad Daaha uga qaadayaa inuu yahay Wakiilka guud ee ku toosinta Bulshadiisa Dhaqanka suubban ee Asalkiisu yahay Diinta sharafta leh, yahayna Macallinka joogtada ah ee ummaddiisa, inuu yahay sameeyaha Maahmaahyaha iyo murtida ay Bulshadu u adeegsato horumarka nolosheeda, in uu mar walba yahay ka sii digaha Cadawga ku soo wajahan ummaddiisa Gude iyo Dibedbaisla markaana yahay Difaacaha keliya hhadraawi aan ka gamban Halis kasta ee hawshiisa darteed loogu geysan karo.
Dunjiga khalqigaagu yahay Armay doorba kuu tahay. Indhahaagu kululaa Eebadaadu toganaa Warmahaagu adakaa Arammida ku haysiyo Aanadaadu weynaa Yaad ka aarsanaysaa Ma nin aabbahaa diley? Soo daji qaabkii ugu dambeeyay ee Flash Player. Heedhee Sahraay heedhe Saran seerka jiilaalka Surbacaadka jaahweynta Sumal-haadka roob havraawi Iyo solanka daaduunka Jadraawi oo sabaad guurey Dhulka oo huwadey siigo Iyo dogobbo soogsoogan Marka beladu sooyaanto Saadaashu beenowdo Saca nuguli kaa leexdo Adna sebenka raac maaha.
Ashkirow farasow Aadyar baa la socdaa Orod kaagu labbaa.
Hadduu kala geeyo uunka, Sooryana qof yimi baa leh Si hadday u noqo weydo Si kalaa u waaceen ah Dad horaa sidaad yeelay. Inkaar naga waayi maysid; Hadday abnawaasad tahay,